Golden Retriever ခွေးလေးကို ဓါးနဲ့ အကြိမ် ၁၀၀ ခန့် ထိုးသတ်ခဲ့သူ။ – SoShwe
Home/Other/Golden Retriever ခွေးလေးကို ဓါးနဲ့ အကြိမ် ၁၀၀ ခန့် ထိုးသတ်ခဲ့သူ။
Mandatory Credit: Photo by Uncredited/AP/REX/Shutterstock (10128325a) In this photo released, by the Scottsdale Police Department shows Jacob Bushkin. Scottsdale police say Bushkin is accused of killing his 4-year-old golden retriever at his home and dumping the body inagarbage can where it was found by family members whom he'd told the dog was dead. Bushkin was arrested Thursday, Feb. 28, 2019 on suspicion of killingaservice animal and animal cruelty Dog Killed , Scottsdale, USA - 01 Mar 2019
Golden Retriever ခွေးလေးကို ဓါးနဲ့ အကြိမ် ၁၀၀ ခန့် ထိုးသတ်ခဲ့သူ။
admin March 8, 2019	Other Leaveacomment
Arizona ပြည်နယ်သား အသက်၂၇နှစ်အရွယ် Jacob Bushkin က သူ့ရဲ့ Golden Retriver ခွေးလေးကို ဓါးနဲ့အကြိမ်၁၀၀ခန့် ထိုးသတ်ခဲ့ပြီး အမှိုက်ပုံထဲမှာ သွားပစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် တိရစ္ဆာန်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ ကြာသပတေးနေ့မှာ ထိန်းသိမ်းဖမ်းဆီးခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ Scottsdale ရဲဌာနချုပ်က ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Jacob ရဲ့ အိမ်နီးနားချင်း Marcia Solomonthis ဆိုသူက “ဒီလိုမျိုး အန္တရာယ်မပြုတတ်တဲ့ခွေးကို ဓါးနဲ့ထိုးသတ်တယ်ဆိုတာ တကယ်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင် ကြောက်စရာကောင်းတာပဲ”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေက Bushkin က သူ့ခွေးလေးသေသွားပြီဆိုတာကို သူ့မိသားစုဝင်တွေပြောပြခဲ့လို့ သူ့မိသားစုဝင်တွေက ခွေးလေးကိုလိုက်ရှာကြည့်ရာမှာ ဂိုဒေါင်ထဲက အမှိုက်ပုံးထဲမှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေက တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်ဆီကို ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ဆရာဝန်က ခွေးလေးဟာ ဓါးနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာထိုးသတ်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ Scottsdale ရဲစခန်းကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရဲတွေက Bushkinကို ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် သူက လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရဲတွေက သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုသွားရောက်ပြီး စစ်ဆေးကြည့်ရှုရာကနေ တခြားသက်သေတွေကိုပါ ရှာဖွေရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
FOX 10သတင်းဌာနရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့ အခင်းဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာ ကြမ်းခင်းကိုသန့်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ မီးဖိုချောင်သုံးဓါးတွေထည့်ရာမှာသုံးလေ့ရှိတဲ့ဘူးအလွတ်နဲ့ သွေးအများကြီးကို တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကခုလက်ရှိမှာတော့ အကျဉ်းချခံထားရပြီး တရားခွင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခံရတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။
Previous ???????????????????? ?????????????????????????????
Next ?????????????????? ??????????????? ?????????????? ??????????????????